Vespa dia mampiseho amintsika ny sarety miavaka mizaka tena afaka mitondra ny entantsika | Vaovao momba ny gadget
fanenitraAnkoatry ny maha marika iray izay nifandraika tamin'ny tantaran'ny tontolon'ny kodiarana roa, dia niasa tamin'ny faritra samihafa koa izy, na farafaharatsiny tato anatin'ny taona vitsivitsy, izay nahagaga sy nahagaga farafahakeliny satria izy ireo dia mampifanaraka ny fampiasa sy ny famolavolana. amin'ny prototype mitovy. Amin'ity fotoana ity dia asehon'izy ireo aminay izay nataon'izy ireo batisa Gita, karazana sarety mahaleo tena afaka mitondra ny entantsika soa aman-tsara amin'ny lafiny rehetra.
Amin'izany fomba izany, ny iray amin'ireo fomba mety hilazana an'i Gita dia mety robot mahaleo tena afaka mitondra soa aman-tsara ny karazana entana ao anatiny. Alohan'ny hanohizanao azy dia lazao aminao fa, araka ny doka nataon'i Vespa ary na avy any Piaggio aza, Gita dia voahodidina ao amin'ilay antsoin'izy ireo hoe vokatra 'Fast Forward', izany hoe, tetik'asa manandrana manavao sy mandroso amin'ny fifaninanana, amin'ny teny hafa, Gita dia prototype fotsiny izay mety tsy hahatratra ny famokarana mihitsy.
Gita no robot mahaleo tena noforonin'i Vespa izay, amin'ny ho avy, dia hitondra ny entantsika avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa.
Amin'ny lafiny famolavolana, araka ny ahitanao na amin'ny sary na amin'ny horonantsary izay hita eo ambonin'ireto tsipika ireto dia miatrika karazana kaontenera sasany izahay 66 santimetatra ny haavony misy kodiarana lehibe roa amin'ny sisiny izay tompon'andraikitra amin'ny famindrana azy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana iray hafa. Eo an-tampony indrindra, ny foy be habe dia manome endrika izay ahafahanao miditra amin'ny faritra misy ny robot.
Farany, marihina fa noho ny kodiarany malala-tanana dia mety hahatratra a hafainganam-pandeha ambony indrindra 35 km / ora. Raha liana te hahafantatra bebe kokoa momba an'i Gita ianao dia lazao aminao fa noho izany dia hiandry rahampitso andro ianao Febroary 2, ny daty izay hanolorana an'i Gita amin'ny besinimaro mandritra ny hetsika 'Mandroso haingana i Piaggio'hatao any an-tanànan'i Boston.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » teknolojia » Robotics » Vespa dia mampiseho amintsika ny sarety miavaka mizaka tena afaka mitondra ny entantsika
Ny LG G6 vaovao dia azo vidiana amin'ny $ 750